NLD Cozah Hakha Nih Rev. Hrang Kil Le Midang5An Tleih Taktak Cang Hna – Myanmar Chins
NLD Cozah Hakha Nih Rev. Hrang Kil Le Midang5An Tleih Taktak Cang Hna
September 9, 2019 Hakha Laimi CHIN 0
Hakha ah phung ninglo Innhmun zuarnak kong, Mipi le cozah ngeihmi thilri pawl ningcang lo zuar ruangah tiin Rev. Hrang Kil le midang5cu nihin ah Palik nih an tleih hna i an hren cang hna tiah theihasi.
Hi hna pawl hi Suimilam 24 chunglawng caan kan pek lai i bia kan ceih colh lai tiah Hakha Palik bawi Sakhanhmu U Ting Zaw Oo nihachim.
Rev. Hrang Kil
An tleih mi hna pawl cu Pu Zung Mang kum (၆၀)၊ Pu Bawi Awrkum (၅၄)၊ Pu Chan Thleng kum(၆၀)၊ Rev. Dr Hrang Kil kum (၅၈)၊ Pu Hmet Al kum(၇၄) နှင့် Pi Ngun Par kum(၅၂) hna an si i, Hi hna pawl nihacozah nih ai timh mi Hakha khua samhnak hmun chungah phung ninglo Vawlei hmun an zuar ti ruangah an tleih hnaasi.
Pu Zung Mang, Pu Bawi Awr, Pu Hmet Al le Rev. Dr Hrang Kil hna cu an ngandamnak kong ah kan lungreathei tiah chungkhar lei cu lungrethei ngaiin an um tiah theihasi. August 20 lioah Hakha NLD cozah nih phung ning lo Inn nan sak tiin Inn 120arak hrawh piak cang hna.
ပြည်သူပိုင်အလွဲသုံးစားမှုဖြင့် ဟားခါးမြို့တွင် လူ (၆) ဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့တွင် ပြည်သူပိုင်အလွဲသုံးမှုဖြင့် အမျိုးသမီးအပါအ၀င် လူ(၆) ဦးကို ဒေသခံရဲက ဖမ်းဆီးပြီး ရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာ Pu Zung Mang (၆၀)၊ Pu Bawi Awr (၅၄)၊ Pu Chan Thleng (၆၀)၊ Rev. Dr Hrang Kil (၅၈)၊ Pu Hmet Al (၇၄) နှင့် Pi Ngun Par (၅၂) တို့ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ကို ယမန် (တနင်္ဂနွေ) နေ့က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့ကို ကျတော်တို့က ၂၄ နာရီဘဲ ထိန်းသိမ်းခွင့်ရှိတော့ အမှုစစ်တဲ့ လုပ်ငန်း ဒီနေ့ကနေ စတင်လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်တယ်။ တရားခံနှင့် တရားခံဖက်က လူတော်တော်များများ စစ်ဆေးရမှာ ဆိုတော့ အချိန်တော့ ယူရလိမ့်မယ်။ တစ်လအတွင်း အမှုပြီးအောင်တော့ ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်” ဟု ဟားခါးမြို့မ ရဲစခန်းမှူး ဦးသိန်းဇော်ဦးက ခိုနုမ်းသုန်သတင်းဌာနကို ပြောပြခဲ့သည်။
၎င်းတို့ ၆ ဦးသည် ပြည်နယ်အစိုးရက ဟားခါးမြို့ တိုးချဲ့မည့် စီမံကိန်း ဧရိယာတွင် မြေကွက် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ မြို့သစ်တိုးချဲသည့် ဧရိယာတွင် နေထိုင်ကြသော ကျူးကျော်အိမ် ၁၂၀ ကျော်ကို အစိုးရက သြဂုတ်လ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။
ယခုရဲစခန်းတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအနက် Pu Zung Mang, Pu Bawi Awr, Pu Hmet Al နှင့် Rev. Dr Hrang Kil တို့သည် နာမကျန်းဖြစ်နေရာ ၄င်းတို့ မိသားစုများအနေဖြင့် ၄င်းတို့၏ ကျန်းမာရေး အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်နေရကြောင်း သိရသည်။
Salai Lung Thli Tum Nih Politician Laimi Kan Pale Duh Poh A Leh Ngam Ve Mi Hna Khi Ninghngal Celh Lo Bia A Si
UNHCR Nih Auh Mi Thinphang Ngai A Si, Lai Tlang Na Tlun Lio Hmanthlak A Ngeih Dih